Taratasy aluminium vita amin'ny alimo vita amin'ny alimo amin'ny alàlan'ny sary hosodoko tsy matevina - Zhejiang Shuanglin Jiate Teknolojia Teknolojia co., Ltd
Ny sokajin'ny Aluminium dia mpanamboatra manokana avy ao Shina, Aluminium Circle For Cookware, Aluminum Disc mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avo lenta amin'ny alim-bolo aluminium Cold Rolled R & D sy ny famokarana, manana ny serivisy isika rehefa vita ny varotra sy teknika fanohanana. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Noho ny fangatahana avo lenta, ny vokatra azonay dia misy amin'ny fomba maro samihafa. Manana safidy lehibe isika mba hanolorana amin'ny teny hoe Gauge sy Sizes amin'ny mpanjifa. Ireo faribolan'ny alim-bary natolotr'i antsika dia nampiasaina tamin'ny endriny madio ho an'i EG tao Hindalco. Ity sehatra ity dia ilaina ho an'ny Deep Draw, Anodizing & Hard Anodizing. Manolotra malefaka, tratra mafy, Half-hard, Full hard Tsy manadino sy mampiray ny natiora.
Ny endriky ny faribolan'ny alimo ho an'ny vilany, vilany, alim-bary (na endrika boribory) dia mahatonga azy ireo ho tsara amin'ny fampiasana amin'ny tsenambola maromaro, toy ny fitaovana fikarakarana cookie, automotive and lighting etc:
Anisotropy ambany, izay manamaivana ny sary sokitra
Hery sy hafanana hafahafa
Ny fahafahana manjelatra, rakotra PTFE (na hafa), anodized
Tsara ny fandinihana
Toetry ny tanjaky ny tanjaka
Faharetana sy fanoherana amin'ny korontana
Ny Aluminium Circle / Disc dia ampiasaina amin'ny fampiasana ara-barotra sy indostria ankapobeny, toy ny trondro capacitor, trondro dendroka, fitsaboana ara-pahasalamana, lakozia, tavoahangy tavoahangy, trondro kosmetika ary trondro fanenon-jiro sns. Ny kôpôles dia toy ny fitaovam-piasana, mandeha amin'ny alàlan'ny fametrahana mangatsiaka mangatsiaka, mihodina, manilika ary farany mikopakopaka amin'ny rakitra aluminium, avy eo fametahana fanafody.
Manolotra karazana Aluminium ho an'ny fitaovana ho an'ny mpanjifantsika isika. Ny vokatra azonay dia novolavolain-dry zareo matihanina amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta sy fitaovana tsara indrindra azo avy amin'ny mpivarotra azo itokisana.
Fanalehibeazana fisakafoanana, spinning cookware, famantarana famantarana, trano fanorenana, fisamborana, sy ny sisa.